नेपाली वास्तुकला र नवनिर्माण | Bipin Adhikari
नेपाली वास्तुकला र नवनिर्माण
सन् १९५०–५१ पछिको खुला नेपालले सम्पदामा रहेको आफ्नोपन बुझ्न सकेन । जिम्मेवारी पाएका मान्छेहरुले निर्माणमा परम्परागत शैली प्रवर्द्धन गरेनन् । आधुनिक भनिएका ज्ञान र विज्ञानले परम्परागत विषयवस्तुलाई आधुनिकीकरण गर्नुको साटो बहिष्करण गरे ।
‘सौन्दर्य मान्छेको जीवनमा नाश हुन्छ, तर कलामा अमर रहन्छ’ भनेका छन् पुनर्जागरणकालीन प्रख्यात इटालियन कलाकार लियोनार्दो दा भिन्चीले । धेरै गहिरो छ यो कुरा । तर नेपाली वास्तुकला, कलाकारिता र लोक परम्पराको कुरा केवल सौन्दर्यको होइन । यो सरल जनजीवन, हाम्रो समाज र यसको औकातसँग सम्बन्धित कुरा पनि हो ।
काठमाडौं विश्वविद्यालयस्थित स्कुल अफ लको निमन्त्रणामा भारत दिल्लीबाट भिजिटिङ प्रोफेसरका रूपमा आउनुभएका मेरा पूर्वप्राध्यापक भीके दीक्षितलाई लिन म त्रिभुवन विमानस्थल गएको थिएँ । उहाँलाई मोटरमा धुलिखेल पठाउनुअघि म बानेश्वर थापागाउँमा ओर्लन चाहन्थेँ । बडो पुलकित भएर प्लेनबाट ओर्लिंदै एयरपोर्ट बाहिर निस्केका प्रा. दीक्षितको अनुहारको उल्लास एयरपोर्ट गेटबाट दाहिने गौशालातर्फ लाग्नेबित्तिकै हराइसकेको थियो । थापागाउँमा म झर्नुभन्दा पहिले उनले भने, ‘नेपालबारे मेरो बेग्लै तस्बिर थियो । तर कुनै साधारण भारतीय सहरभन्दा फरक लागेन । कता हरायो नेपालको ऐतिहासिक तस्बिर ? पर्सी ब्राउनले वर्णन गरेजस्तो, सिल्भाँ लेभीले लेखेजस्तो !’ कुरा साँचो हो । नेपाल र नेपाली मन पराउने पाको उमेरका ती प्राध्यापकलाई पनि आफ्नो ‘होस्ट’ का अगाडि तटस्थ हुन गाह्रो भयो । नेपालले त्यो पहिचान अब लगभग बिसाइसकेको देखिन्छ ।
चार दशकअघिको कुरा हो । म मधेसबाट पहिलोपल्ट काठमाडौं आउँदा बसबाट ओर्लिएको ठाउँ हो गौशाला । बेलुकी हुनै लागेको थियो । त्यो बस लहानबाट हाई स्कुलका विद्यार्थीलाई शैक्षिक भ्रमणमा लिएर आएको थियो । थानकोटबाट छिरेदेखि नै बाटोबाट देखिएको काठमाडौं मलाई ‘सेन्सेसनल’ लाग्यो । त्रिभुवन राजपथको वाक्वाकी हराएको थियो । सँगै साथी ललिता श्रेठ (मैथिली गायिका) पनि थिइन् । अहिलेको स्तरमा सोच्ने हो भने हामी दुवै मधेसकालाई सिरहाका दुई अलगअलग गाउँबाट एकैपटक न्युयोर्कको म्यानहटन पुगेजस्तै भएको थियो । निश्चित रुपम म्यानहटनका विशेषता फरक छन् काठमाडौंका भन्दा । तर दुवै सहर एकअर्काको मापदण्डमा नमिल्ने, मनमा खलबली मच्चाउने खालका । सोध्दैसोध्दै म दिदी भए ठाउँं मित्रपार्कतिर लागेँ । दिदीले खाजा दिनुभयो । पेट टम्म भएपछि म दिदीको आँखा छलेर मिलिक्क गौशालातिर फर्कें । कारण थियो– बाटोमा पर्ने जय बागेश्वरीको मन्दिर । काठमाडौंको पहिलो संवेदनात्मक परिचय यसैले दिएको हो ।
अघि आउँदा देख्नेबित्तिकै मलाई त्यो मन्दिर नहेरी नहुने भएको थियो । दुई/तीन फन्का लगाएपछि म फर्कें । यताउति चहार्दा दिदीको घर छेउकै चारुमती विहारतिर ठोक्किन पुगेँ । मन्दिरपछि दोस्रो परिचय यो बिहारले दिएको हो । अर्को खजाना हात लागेजस्तो । त्यसपछि छेउमै कसैलाई पनि सम्मोहित गर्ने चन्द्र विनायक मन्दिर (गणेस्थान) रहेछ । काठमाडौंको एउटा नमुना दुई घण्टामै छर्लङ्ग भएको थियो । त्यो नमुना थियो– घरबुना कपडाजस्तो कस्सिएर सिएको नेपाली वास्तुकला, कलाकारिता र लोकपरम्पराको । वास्तुकलाभित्र केके छन् ? त्यो त सोह्र सत्र वर्षको ठिटोले बुझ्न सक्ने कुरा थिएन । तर वास्तुकलाको बाहिरी स्वरूप अद्वितीय मात्रै थिएन, त्यसले एउटा सभ्यताको परिचय दिन्थ्यो । त्यस्तो सभ्यता जुन संसारमा कतै छैन, थिएन । यो चार दशकमा नेपाल कति ओरालो लागेछ, प्रा. दीक्षितको निर्दोष टिप्पणीबाट थाहा हुन्छ ।
हिमालको काखमा रहेको पहाड, उपत्यका तथा तराई एसिया महादेशका दुई ठूला भारतीय तथा चिनियाँ सभ्यताको बीचमा फरक परिचय लिई हुर्केबढेको थियो । सम्पूर्ण मुलुक विविधतायुक्त विशाल प्राकृतिक बगैँचा देखिन्थ्यो । सानाठूला जंगल, शीतल हावापानी, खोलानाला, रमणीय हरियोपरियो खेतबारी, तिनका बीचमा रहेका टुँडाल हालेका नेपाली शैलीका घरहरू, छेउछाउमै कतै तलैतला भएका पिरामिड आकारका मन्दिर, तिनलाई सुहाउने सुनौलो गजुर लय हालेर उपस्थित देखिन्थे । गाउँसहरले आफ्नो परिचय आफैं दिन्थे । यिनैको बीचमा रहेको काठमाडौं उपत्यका, यहाँको प्यागोडा शैलीका मन्दिर, शिखरशैलीका देवालय र स्तूप, गुम्बा वा चैत्यशैलीसँगै ठूला दरबार तथा घर अड्डाको वास्तुकलाका साथै सामान्य नागरिक आवास, धारा, कुवा, चौतारा, पाटीपौवा वा फाल्चा नेपाली वास्तुकलाका नमुना थिए । कुनै पनि सहर एक झल्कोमा यति सम्पन्न देख्न सकिँदैन । त्यो वैभव आफैमा नचिताएको प्राप्तिजस्तो देखिएको थियो ।
निश्चय पनि उपत्यकाका घरहरूको आँखीझ्याल र पुराना मौलिक शैलीका झिँगटी रंगरोगन, काठको भुइँ, दैलो, चुक्कुल, दलिन वा थामको प्रयोग नयाँ आउने सबैको चासोमा पर्छन् । भित्र–बाहिर भित्तामा प्रयोग गरिएको सुर्खीचुन र घर सिँगार्न प्रयोग गरिएका झल्लरीमल्लरी, छानो थेग्न बनाइएका काठका टुँडालमा कुदिएका देवता, युवकयुवती वा जनावरका आकर्षक मूर्तिहरूले कसलाई मोहित नगरेको होला ? झन् त्यसमा पनि उपत्यकाभित्रका बुङ्मती, खोकना र साँखु एवं उपत्यकाबाहिरका नुवाकोट दरबार क्षेत्र गोर्खा दरबार क्षेत्र वा दोलखा भीमेश्वर मन्दिर क्षेत्रका सम्पदाको के कुरा गर्नु ! बुझ्नेलाई श्रीखण्ड नबुझ्नेलाई खुर्पाको बिँड । निजी हुन या सार्वजनिक, सरकारी हुन् वा आम जनताको, यी सबै संरचनाले धार्मिक, सामाजिक, सांस्कृतिक तथा भाषिक परिचय स्थापित गरेका थिए । काठमाडौंलाई शताब्दियौंदेखि हिमवत् खण्डको सांस्कृतिक राजधानी त्यसै भनिएको रहेनछ ।
नेपाली वास्तुकला, ललितकलाका दृष्टिले मुलुक राष्ट्रिय संकटकाल लगाउनुपर्ने अवस्थामा पुगेको छ । बालबालिकालाई देखाउन सकिने केही ठाउँ छन् तर संस्कृतिसहित बाँच्न सिकाउने आधार अब लगभग छैन ।
नेपालीको सम्पदा चेतनाको इतिहास कति पुरानो छ ? विज्ञले भन्न सक्लान् । वास्तुकलाले आकार र प्रकार लिनुभन्दा पहिले कला–शिल्प र प्रविधिका परम्परा सुरु भए होलान् । भनिन्छ, सम्राट् अशोकले २५० इसापूर्वमा स्थापना गरेका स्तूपहरूभन्दा पहिलेका कुरा इतिहासमा पाउन गाह्रो छ । तराईको रुपन्देही र तिलौराकोट छेउछाउका क्षेत्रलाई आफैं राम्रो गरी उत्खनन् गर्दा प्रारम्भिक बौद्ध निर्माणका पुराना चिह्न पाउन सकिन्छ होला । स्वयम्भूनाथ र बौद्धनाथका विद्यमान तीर्थक्षेत्रबाट पनि धेरै कुरा थाहा हुन सकेको छैन । तर त्यसको पनि अझ अध्ययन अन्वेषण चाहिएको छ । चिनियाँ ताङ वंशका समयमा करिब ६५७ तिर घुम्न आएका यात्री वाङ ह्वेन–त्सेले पहिलोपल्ट नेपाली वास्तुकलाको गौरव गाथाको परिचय गराएका हुन् । उनका लेखोटहरूले नेपालमा रहेका ठूला तथा सुन्दर दरबारहरू, यहाँ भइरहेको बहुमूल्य ढुंगाको प्रयोग, काठका सुन्दर घरहरू तथा भित्तामा कोरिएका बेजोड चित्रहरू उल्लेख गरेका छन् । धेरै छाना भएका प्यागोडा शैलीका भवनहरू तथा तिनमा व्यापक रूपमा देखिएका शिल्पकला वर्णन गरिएको छ ।
लिच्छविकालका ती कलाकृति मल्लकालमा जनस्तरमा पुगेको देखिन्छ । ती शाह, राणाकालमा क्रमश: देशभरि छरिन गए । काठमाडौंको तलेजु, पाटनको मत्स्येन्द्रनाथको मन्दिर, भक्तपुरको चाँगुनारायणको मन्दिर र त्यहाँको न्यातपोल वा पाँचतले मन्दिर सबैका लागि नमुना भए । न्यातपोल देवललाई धार्मिक वास्तुकलाको सामान्य संरचना रूपमा लिन सकिन्छ । यसको प्रयोग धेरै ठाउँमा गरिएको छ । सबैभन्दा विशिष्ट छैटौं शताब्दीमा बनेको चाँगुनारायाणको मन्दिर नै हो । न्यातपोल देवल चाँगुनारायणजत्तिकै राम्ररी कुदिएको छैन । मन्दिरहरूबाहेक विहार वा मठहरूले पनि एउटा यस्तो शैली प्रदर्शन गर्छन्, जुन सधैं नै विशिष्ट छ । यी सबै वास्तुकला हिमाली राज्यको आवश्यकता तथा सम्भाव्यताका आधारमा निर्माण गरिएका हुन् । पर्सिवल लन्डनले लेखेका छन्– नेपालको घरेलु वास्तुकला अरू कुनै मुलुकको भन्दा चित्रमय (पिक्चरेस्क) छ । यो वनक्षेत्र भएको, धेरै पानी पर्ने र सूर्यको उज्यालो पाएको हिमाली राज्यको सम्भावना तथा आवश्यकतामा आधारित भएर गरिएको एउटा विशिष्ट प्रयोग हो । युरोपले यस्तो गर्न सकेको छैन ।
पाटन नेपालको सबैभन्दा पुरानो सहर मानिन्छ । काठमाडौंले पाटनबाटै सिक्यो । तीन सहरबीचको प्रतिस्पर्धाका आधारहरू सैन्यबलभन्दा भाषा, धर्म, संस्कृति, तिनलाई निर्वाह गर्ने वास्तुकला र कृषि तथा पशुपालनलाई निरन्तर कायम राखी अपनाइएको अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार हुन गए । सिक्ने सिकाउने त्यो प्रवृत्तिलाई राष्ट्रिय एकीकरणले मलजल गर्‍यो । राज्यको स्पष्ट नीतिले गर्दा काठमाडौंको बौद्धिक, सांस्कृतिक सम्पत्ति सम्पूर्ण मुलुकमा फैलिँदै गयो । आज पनि देख्न सकिन्छ, धनकुटाको पुरानो बजार र सिलगढी डोटीको बजारमा केही फरक छैन । उस्तै डाँडो, भीर छाडेर बनेका पुराना नमुनाका घरहरू, उस्तै ढुंगाका भर्‍याङ, पसल–कवल, मन्दिर तथा देवलहरू । काठमाडौं छिर्ने पुरानो सहर भीमफेदी होस् वा व्यापारिक सहरहरू बन्दीपुर, बाग्लुङ वा पुराना किलाजस्ता गोर्खा वा धार्मिक महत्त्वका रिडी, यी सबै राष्ट्रिय कलापुञ्जका रूपमा विकसित भए ।
पोखरा र पाल्पामा झनै सघन उपस्थिति थियो । पर्सिवल लन्डनले आफ्नो पुस्तकमा रिडीको बयान गरेका छन् । नेपाली वनारस तीर्थ जान थाल्नुभन्दा पहिले रिडी जान्थे रे । कहाँ प्राचीन वाणारसी र कहाँ मध्यकालमा विकसित रिडी तर यसले प्रतिस्पर्धा गर्दो रहेछ । बाटोको कठिनाइ र वनारस जाने सहजता बढ्दै गएपछि रिडी सुक्यो वनारस फुक्यो । यसैको प्रमाण हो महारानी साम्राज्यलक्ष्मी देवीद्वारा आफ्नो नाममा बनारसमा नेपाली शैलीको शिव मन्दिरको निर्माण । बेलामा ध्यान नपुर्‍याउँदा आजको पिँढीलाई कालीगण्डकी वा मुक्तिनाथ थाहा होला तर रिडीबारे थाहा हुँदैन । राष्ट्रको सामूहिक विवेक यसरी नै क्षीण हुँदै जान्छ ।
कुरा पहाडको मात्र होइन । नेपाली वास्तुकला राणा शासनकै बेला क्रमश: निर्माण हुँदै गएका मधेसका सहरहरूमा पनि फैलिँदै गयो । पुरानो बुटवल बजार अब किताबको पानामा मात्र देखिन्छ तर नेपाली वास्तुकला त्यहाँ पनि झलझली देखिन्छ । वीर शमशेरले वीरगन्जमा बजार अड्डा राख्दा वा पं. कृष्णप्रसाद कोइरालाले घोग्राहाको नाउँ फेरि विराटनगर राखेपछि सहर निर्माणका लागि यही शैलीलाई पछ्याए । जनकपुरमा जानकी मन्दिर बनाउनुभन्दा पहिले राममन्दिर पनि यही शैलीमा बनाइएको हो । पश्चिमतर नेपालगन्ज नाका सञ्चालनमा आएपछि यही नेपाली मौलिक वास्तुकला प्रयोगमा आयो । त्यसैले कुनै पनि नाकाबाट नेपाल छिर्नेबित्तिकै यात्रीहरूले बृहत्तर भारत वर्षभन्दा नेपालमा नितान्त नौलो मौलिकता देख्थे । यी सबै प्रयोग मौलिक मात्र थिएनन्, स्थानीय हावापानी, भौगोलिकता, निर्माण सामग्री र अर्थ व्यवस्था सुहाउँदा थिए ।
पाटनमा जन्मेका अरनिको (सन् १२४५–१३०६) ले भोट र चीनमा गएर आफ्नो वास्तुकला देखाएका थिए । उनी भेनिसका घुमक्कड व्यापारी मार्को पोलोका समकालीन थिए । उनले पनि सिल्क रोड हुँदै तत्कालीन मंगोलियन साम्राज्य, चीनलगायत विभिन्न मुलुक घुमेका थिए । तर अरनिको प्यागोडा शैलीका मन्दिरहरू निर्माण गर्ने दक्ष कलाकार थिए । उनले बनाएको श्वेत चैत्यलाई मित्रताको प्रतीक मानिएको छ । उनले नेपाली वास्तुकलालाई चीन हुँदै कोरिया र क्योटोसम्म फैलाए ।
तत्कालीन नेपालमा धातुकर्मी र मूर्तिकारहरूले वास्तुकला र मूर्ति निर्माणमा अनेक रासायनिक विधिको उच्चतम प्राविधिक क्षमता देखाइ प्रयोग गरिसकेका थिए । अरनिकोले बनाएको श्वेत चैत्य जाने बाटोको काठको द्वार, ढुंगाको सिँढी, चैत्यभित्रका तिकिझ्या, दीपंकर, शाक्यमुनि, मैत्रेय बुद्ध मूर्तिहरू अद्वितीय मानिन्छन् । महांकाल, श्वेत तारा, हरित तारा, अवलोकितेश्वर, पौभा चित्रहरू र मुख्यत: श्वेत चैत्यको गजुर नेपाली कलाकारिताका उदाहरण हुन् । अरनिकोले बौद्ध दर्शन र प्रतीकसहितको वास्तुकला चीनमा लगे । सिद्धान्तसमेत छिरेकाले उनको कलाकृति फैलिँदै गएको हो । यी सबैको धेरै महत्त्व छ । युरोपमा औद्योगिक क्रान्ति सुरु भएकै थिएन । नेपाल यस क्षेत्रमा चर्चित भइसकेको थियो ।
सन् १९५०–५१ पछिको खुला नेपालले सम्पदामा रहेको आफ्नोपन बुझ्न सकेन । जिम्मेवारी पाएका मान्छेहरूले निर्माण कार्यमा परम्परागत शैलीको प्रवद्र्धनमा केही गरेनन् । आधुनिक भनिएका ज्ञान र विज्ञानले परम्परागत विषयवस्तुलाई आधुनिकीकरण गर्नुको साटो बहिष्करण गरे । स्वदेशी वास्तुकला, कलाकारिता र त्यसको जगमा हुर्केको संगीत, वाद्यवादनलगायतका लोक परम्पराबारे राज्यका तर्फबाट प्राविधिक सहयोग, श्रृण वा अनुदान भनेर कुनै कार्यक्रम आउन सकेन । करको दर घटबढ मात्र गर्दा पनि परम्परागत शैलीहरू पुनर्निर्माणमा आफैं देखा पर्ने थिए । तर त्यस्तो भएन । निर्माण कार्यमा सबैभन्दा धेरै सरकारले खर्च गर्छ । तर सरकारको सोचमा यस्ता कुरा कहिल्यै आएनन् ।
उदाहरणका लागि बितेका केही वर्षमा सिंहदरबारभित्रका सबै खुला क्षेत्र भवनहरूले भरिए । तर मूलत: ‘पर्सियन’ तथा बेलायती शैलीको जुन रुप राणाहरूले नेपालमा समायोजन गरे त्यस रुपमा सिंहदरबारको विस्तार भएन । मूल पाटोलाई छाडिदिने हो भने राष्ट्रिय लज्जाका रूपमा देखिन्छ सिंहदरबार । डाँडाकाँडा, उपत्यका र समथरबाट खारिएर सिंहदरबारसम्म पुगेका नीति निर्माता वा प्रशासकहरूले आफू जन्मेको देस कति चिनेका रहेछन्, त्यो पनि थाहा हुन्छ । त्यसैले त भुइँचालोपछि अर्बौं रुपैयाँ खर्च हुँदै गरेको पुनर्निर्माणमा पनि नेपाली वास्तुकलाले ठाउँ पाएन । राज्यले खर्च गर्दा साझास्तरको निर्माण हुन सक्दैन भने अरू मापदण्ड के काम लाग्लान् ?
जे अपनाइएको छ, त्यसको स्तर छैन आधुनिक नेपालमा । लोकभाकामा भनिन्छ, ‘टाढाको जोगी सिद्ध, गाउँको जोगी गिद्ध ।’ नेपाली वास्तुकला, कलाकारिता र लोक परम्परा त गिद्ध नै बनाइएको छ आज । यसलाई जोगाउने हो भने पहिले संरक्षण दिनुपर्ने हुन्छ । पुराना बाँकी रहेका जेजस्ता छन्, तिनको संरक्षण मात्र नभएर नवनिर्माणबाट पनि पुनरुत्थान गर्ने प्रयास हुनुपर्छ ।
जे अपनाइएको छ, त्यसको स्तर छैन आधुनिक नेपालमा । लोकभाकामा भनिन्छ, ‘टाढाको जोगी सिद्ध, गाउँको जोगी गिद्ध ।’ नेपाली वास्तुकला, कलाकारिता र लोक परम्परा त गिद्ध नै बनाइएको छ आज । यसलाई जोगाउने हो भने पहिले संरक्षण दिनुपर्ने हुन्छ । पुराना बाँकी रहेका जेजस्ता छन्, तिनको संरक्षण मात्र नभएर नवनिर्माणबाट पनि पुनरुत्थान गर्ने प्रयास हुनुपर्छ । ग्रिसको एथेन्स, हंगेरीको बुडापेस्ट, रोमको इटाली, बेलायतको अक्सफोर्ड र मोरक्कोका पुराना सहरहरू यस्तै फरकपन लिएर विकसित भएका थिए । उनीहरूले आज पनि त्यो पहिचानलाई जोगाएकै छन् । तर गत चार दशकमा नेपाल यस अर्थमा स्वाहा हुने अवस्थामा पुगेको छ । केही कसर बाँकी थिए– तिनलाई भुइँचालोले चुनौती दिएको छ । राज्य अघि लाग्ने हो भने आज पनि हामीसँग त्यस्ता कलाकार तथा शिल्पी छन् जसले यो प्रयासलाई सफल बनाउन सक्छन् । अहिले नेपाल वास्तुकला, ललितकला इत्यादिको दृष्टिले राष्ट्रिय संकटकाल लगाउनुपर्ने अवस्थामा पुगेको छ । बालबालिकालाई देखाउन सकिने केही ठाउँ छन् तर संंस्कृतिसहित बाँच्न सिकाउने आधार अब लगभग छैन भन्दा हुन्छ । कसले गर्ने त ?
आफ्नो कुरा आफैले जोगाउनुपर्छ । साझा नेपाली पहिचानसँगै हामीसँग आ–आफ्ना क्षेत्र, जाति र संस्कृतिका ढल्दै गएका धरोहर पनि छन् तिनलाई पनि उकास्नु छ । सानोतिनो स्वार्थका लागि राष्ट्रिय सम्पदालाई उछितो गर्नु हुँदैन । आजसम्म जेजति हामीले पायौं, काठमाडौंका रैथाने नेवार जातिबाट पायौं, अब यस सम्बन्धमा सबै लाग्नुपर्छ । मुलुकले अहिले ७ सय ५३ वटा स्थानीय सरकार पाएको छ । चाहना गर्ने हो भने मुलुकभित्र चुर्नासरी व्याप्त कंक्रिटका जंगलहरू क्रमश: व्यवस्थापन गरी युगसापेक्ष परम्परागत वास्तुकलामा आधारित नवनिर्माण सुरु गर्न सकिन्छ । अठोट हुनुपर्छ । कवि धर्मराज थापाले कतै लेखेका छन्, ‘परेवाको भाले घुर्‍यो हिँउको टाकुरीमा, सुन फलाउने मेरै बल छ मेरै पाखुरीमा ।’